Mabhosvo esirivha (1-10)
Kubva paSinai (11-13)
Mafambiro avaiita (14-28)
Hobhabhu anokumbirwa kutungamirira Israeri (29-34)
Munyengetero waMozisi pakuputsa musasa (35, 36)
10 Jehovha akabva ati kuna Mozisi: 2 “Zvigadzirire mabhosvo+ maviri; agadzire nesirivha uchishandisa sando, woashandisa pakuunganidza ungano nepakuputsa misasa. 3 Kana akaridzwa ese ari maviri, ungano yese inofanira kudanwa kuti iuye kwauri pasuo retende rekusanganira.+ 4 Kana pakaridzwa rimwe chete, machinda, kureva vakuru vezviuru zvevaIsraeri, ndiwo chete anofanira kuuya kwauri.+ 5 “Kana mukaridza mabhosvo muchikwidza nekuderedza, vaya vane misasa iri kumabvazuva+ vanofanira kusimuka. 6 Pamunoridza mabhosvo kechipiri muchikwidza nekuderedza, vaya vane misasa iri kumaodzanyemba+ vanofanira kusimuka. Mabhosvo anofanira kuridzwa seizvi pese panosimuka musasa mumwe nemumwe. 7 “Pamunenge muchida kuti ungano yese iungane pamwe chete, munofanira kuridza mabhosvo+ asi musingakwidzi nekuderedza. 8 Vanakomana vaAroni, vapristi, vanofanira kuridza mabhosvo,+ uye uyu ucharamba uri murau kwamuri kwezvizvarwa zvenyu zvese. 9 “Kana muchifanira kuenda kuhondo munyika yenyu muchinorwisana nemudzvinyiriri anenge achikutambudzai, munofanira kudaidza vanhu kuhondo muchishandisa mabhosvo,+ uye muchayeukwa naJehovha Mwari wenyu, moponeswa pavavengi venyu. 10 “Uyewo panguva dzenyu dzekufara,+ pamitambo+ yenyu uye panotanga mwedzi yenyu, munofanira kuridza mabhosvo pamusoro pemipiro yenyu inopiswa+ nezvibayiro zvenyu zverugare;+ achava sechiyeuchidzo kwamuri pamberi paMwari wenyu. Ndini Jehovha Mwari wenyu.”+ 11 Kuzoti mugore rechipiri, mumwedzi wechipiri, pazuva rechi20 remwedzi wacho,+ gore rakasimuka kubva pamusoro petebhenekeri+ yeChipupuriro. 12 Saka vaIsraeri vakatanga kusimuka kubva murenje reSinai vachitevedzana maererano nemarongerwo avo pakutama,+ uye gore racho rakanomira murenje reParani.+ 13 Aka ndiko kaiva kekutanga kutama vachitevedzera zvakarayirwa Mozisi naJehovha.+ 14 Saka boka remadzinza matatu remusasa wevanakomana vaJudha rakatanga kutama maererano nezvikwata zvaro,* uye Nashoni+ mwanakomana waAminadhabhi ndiye aitungamirira boka racho. 15 Aitungamirira chikwata chedzinza revanakomana vaIsakari ndiNetaneri+ mwanakomana waZuari. 16 Aitungamirira chikwata chedzinza revanakomana vaZebhuroni ndiEriyabhi+ mwanakomana waHeroni. 17 Tebhenekeri payakaputswa,+ vanakomana vaGeshoni+ nevanakomana vaMerari,+ vatakuri vetebhenekeri, vakasimuka. 18 Boka remadzinza matatu remusasa waRubheni rakabva ratama maererano nezvikwata zvaro,* uye Erizuri+ mwanakomana waShedheuri ndiye aitungamirira boka racho. 19 Aitungamirira chikwata chedzinza revanakomana vaSimiyoni ndiSherumieri+ mwanakomana waZurishadhai. 20 Aitungamirira chikwata chedzinza revanakomana vaGadhi ndiEriyasafi+ mwanakomana waDheueri. 21 VaKohati, vatakuri vezvinhu zvemunzvimbo tsvene,+ vakabva vasimuka. Tebhenekeri yaifanira kunge yamiswa pavaizosvika. 22 Boka remadzinza matatu remusasa wevanakomana vaEfremu rakabva ratama maererano nezvikwata zvaro,* uye Erishama+ mwanakomana waAmihudhi ndiye aitungamirira boka racho. 23 Aitungamirira chikwata chedzinza revanakomana vaManase ndiGamarieri+ mwanakomana waPedhazuri. 24 Aitungamirira chikwata chedzinza revanakomana vaBenjamini ndiAbhidhani+ mwanakomana waGidhiyonai. 25 Boka remadzinza matatu remusasa wevanakomana vaDhani rakabva ratama maererano nezvikwata zvaro,* riri kumashure kwemapoka acho ese, uye Ahiezeri+ mwanakomana waAmishadhai ndiye aitungamirira boka racho. 26 Aitungamirira chikwata chedzinza revanakomana vaAsheri ndiPagieri+ mwanakomana waOkrani. 27 Aitungamirira chikwata chedzinza revanakomana vaNaftari ndiAhira+ mwanakomana waEnani. 28 Aya ndiwo masimukiro aiita vaIsraeri nemapoka* avo pavaitama.+ 29 Mozisi akabva ati kuna Hobhabhu mwanakomana waReueri*+ muMidhiyani, tezvara vaMozisi: “Tava kutama kuti tiende kunzvimbo yakanzi naJehovha, ‘Ndichakupai.’+ Handei tese,+ uye tichakubatai zvakanaka, nekuti Jehovha akavimbisa vaIsraeri zvinhu zvakanaka.”+ 30 Asi iye akati kwaari: “Handikwanisi kuenda nemi. Ndinoda kudzokera kunyika yangu nekuhama dzangu.” 31 Iye ndokuti: “Ndapota musatisiya, nekuti ndimi munoziva patinofanira kudzika musasa murenje, uye munogona kutiratidza nzira.* 32 Uye kana mukaenda nesu,+ chero zvakanaka zvatichaitirwa naJehovha, tichakuitiraiwo izvozvo.” 33 Saka vakasimuka vachibva pagomo raJehovha+ vakafamba rwendo rwemazuva matatu, uye areka+ yesungano yaJehovha yaiva pamberi pavo parwendo rwemazuva matatu vachitsvaga nzvimbo yekuzorora.+ 34 Uye gore raJehovha+ rakanga riri pamusoro pavo masikati pavakasimuka vachibva pavaiva vakadzika musasa. 35 Pese paisimudzwa Areka, Mozisi aiti: “Simukai, haiwa Jehovha,+ vavengi venyu ngavapararire, uye vaya vanokuvengai ngavatize pamberi penyu.” 36 Uye payaizorora, aiti: “Haiwa Jehovha, dzokai, kuzviuru zvisingaverengeki* zvevaIsraeri.”+
^ ChiHeb., “nemauto aro.”
^ ChiHeb., “nemauto.”
^ Kureva, Jetro.
^ Kana kuti “munogona kuva maziso edu.”
^ Kana kuti “kumakumi ezviuru.”